‘Tiri kugadzirisa zvinonetsa’leconomico
MUTUNGAMIRIRI wenyika, President Mnangagwa, vanoti Hurumende iri mushishi kugadzirisa matambudziko akasiyana ayo akatarisana neZimbabwe munyaya dzeupfumi. Vakataura mashoko aya vari kunhandare yeNational Sports Stadium, muHarare, nemusi weChitatu svondo rino kuzviuru nezviuru zvevanhu vainge vakaungana kumhemberero dzekusvitsa kweZimbabwe makore 38 ekuzvitonga kuzere.
President Mnangagwa vanoti mhemberero dzegore rino dzine musiyano nedzemamwe makore sezvo dziri kuuya panguva iyo pave neHurumende itsva iyo yakazvipira kusimudzira budiriro yenyika.
Vanoti Hurumende iri kushanda siku nesikati mukutora matanho ekupedza dambudziko rekushaikwa kwemari munyika, iro rinova guru.
“Nyaya yekushaikwa kwemari munyika inyaya yatiri kushanda zvine simba kuti tinge tichigadzirisa kuburikidza nekutora matanho akasiyana. Asi iri idambudziko risingakwanise kupedzwa nezuva rimwe,” vanodaro.
President Mnangagwa vanoenderera mberi vachiti: “Mhemberero dzegore rino dzakasiyana zvikuru nedzimwe dzemakore adarika sezvo dziri kuuya panguva iyo pave neHurumende itsva. Tiri parwendo rwutsva rwekusimudzira budiriro yenyika yedu zvisinei neganda remunhu uye izvi zvichiitwa murunyararo. Matambudziko akatarisana nenyika haapere nezuva rimwe asi nekufamba kwenguva tichazadzikisa zvinangwa zvedu. Zimbabwe ichasimuka zvakare.”
Vanokurudzira zvizvarwa zvose zveZimbabwe kuti zvibatane mukusimudzira upfumi hwenyika.
“Zvakakosha kuti tibatane mukusimudzira upfumi hwenyika. Mwedzi mishanu tapinda muHurumende itsva, tinoti makorokoto Zimbabwe, Mwari ngaakomberere Zimbabwe,” vanodaro.
President vanoti Hurumende ichaona kuti munyika mune zvekudya zvakakwana kuburikidza nechirongwa cheCommand Agriculture.
Vanotizve kusimudzirwa kwechikamu chezvekurima nemaindasitiri kwakakosha zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika pamwe nekuti kuve nemabasa.
President Mnangagwa vanoti sarudzo dziri kuuya mumwedzi mishoma inotevera dzinofanirwa kuitwa murunyaro.
“Tinoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo pasina mhirizhonga uye takadaidza mapoka akawanda kuti auye kuzoongorora sarudzo idzi ayo anosanganisira African Union neSadc.”
Hurumende, vanodaro President Mnangagwa, iri kufadzwa nerutsigirwo rwairi kuwana kubva kune dzimwe nyika pasi rose izvo zvaita kuti vemabhizimisi ekunze vave nechido chekushandira muZimbabwe.
President Mnangagwa vanorumbidza magamba akazvipira kurwira rusununguko rweZimbabwe kubva kuhutongi hwehudzvanyiriri.
Dzimwe mhemberero dzezuva iri dzakaitwawo kumatunhu ose enyika uko mashoko emutungamiriri wenyika akaverengwa.
Source:‘Tiri kugadzirisa zvinonetsa’